Fikarohana momba ny firaisana Ny tsikera amin'ireo Boky nomen'ny fanahinao nataon'i Robert Schwartz & ambaratonga ary lalàna momba ny tontolon'ny Fanahy nataon'i Khorshed Bhavnagari - Fikarohana Reincarnation
Ny Fikarohana momba ny firaisana amin'ny sehatry ny vatana dia manondro fa ny fanahin'ny olona dia miara-miaina amin'ny fiainana ara-panahy mba ho tafaray amin'ny olon-tiany avy amin'ny fiainana taloha
Misy porofo mivaingana fa misy ny firaisana ara-nofo amin'ny vatana vaovao, miainga avy amin'ny tranga tsy miankina amin'ny fikambanan'ny zaza vao teraka, anisan'izany ny asan'ny tara Ian Stevenson, MD, avy amin'ny Oniversiten'i Virginia. Stevenson dia nanangona ireo tranga 1200 izay nahitan'ny ankizy kely an-tsoratra ny fahatsiarovan-tena azy ireo. Araka ny hevitro, ireo tranga ireo, amin'ny ankapobeny, dia manaporofo ny fiverenan'ny vatana vaovao. Ny lahatsary fikarohana momba ny firaisan'ny virosy virjiny izay ahitana Dr. Stevenson sy ny asany dia: Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao
Ny fikarohana momba ny vatana dia mampiseho fa ny fanahy dia manomana fiainana mialohan'ny hiverenan'izy ireo indray, ka tafaray miaraka amin'ny olon-tiany izy ireo miaraka amin'ny efa lasa teo aloha. Ian Stevenson dia nanamarika fa ao amin'ny 22% fanadihadiana tsy voatanisa ara-dalàna, ny fanahy izay miomana amin'ny zaza vao teraka dia nandefa nofinofy ho an'ny olona iray ao amin'ny fianakaviana, izay nampita fa ny fanahy dia ho tonga haingana ao amin'io fianakaviana io. Nantsoin'i Stevenson ireny karazana nofinofy ireny "manambara nofinofy", rehefa nanambara ilay fahatongavana ho tonga ao amin'io fianakaviana io ny fanahy, amin'ny alalan'ny nofy. Azontsika atao ny mieritreritra an'izany hoe toy ny tamin'ny telefaonina iray naman'ilay namana taloha, hoe: "Tonga eto an-tanàna aho ary hijanona ato an-tranonao. Mivonona!"
Ny porofo matanjaka indrindra fa ny fanahy dia mikasa ny androm-piainany mba hiaraka amin'ny olon-tiana dia nomen'ny Ian Stevenson's Twin Study. Ity fanadihadiana ity dia nanambara fa tamin'ny kambana 31 (kambana 62) izay nanana fahatsiarovana fiainana taloha izay voamarina, tamin'ny 100 isan-jaton'ny tranga dia nisy fifandraisana lehibe teo amin'ny fiainana taloha. Ao amin'ny sary naseho etsy ambony dia misy rahavavy ireo vehivavy antitra, izay teraka indray tao amin'ny vatana vavy rehefa sary ny sary, kambana mpirahalahy. Tsindrio ny sary hanitatra azy. Mariho ny Mitovitovy amin'ny endriky ny endriky ny iray amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any:
Ny fikarohana momba ny sehatry ny Reincarnation dia manome antsika fomba fijery hafa momba ny fomba fiasan'ny vatana amin'ny ankapobeny. Ireo fijery ireo dia navoaka tao amin'ny tranokalan'ny tranokala ReincarnationResearch.com mitondra ny lohateny hoe: Ireo Fitsipiky ny Fampodiana an-tokantrano
Fahatakarana ny zava-kendren'ny fanambadiana sy ny natioran'ny Fanahy Masina
Na dia nanamafy aza ny fikarohana momba ny firaisana, dia manamarina fa ny drafitr'izao tontolo izao dia mifototra amin'ny zavaboary ara-panahy, misy ireo olana maro hafa momba ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao izay tsy azo zaraina amin'ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana, toy ny hoe oviana no nanomboka ny fanahy, inona no tanjon'ny fahaterahana indray ao amin'ny vatana, firy ny androm-piainantsika Ny tany sy ny toerana hipoitra ny vatana vaovao indray.
Midira Kevin Ryerson sy ny Fanahy Ahtun Re
Tamin'ny taona 2001, nanomboka niara-niasa tamin'i Kevin Ryerson aho, izay mpanelanelana amin'ny tontolo iainana izay niara-niasa tamin'ny mpilalao sarimihetsika sy mpanoratra Shirley MacLaine nandritra ny 30 taona mahery. Kevin dia asongadin'ny bokin'i Shirley efatra, ao anatin'izany ny bestseller, Sahy maka risika. Kevin dia milalao ny tenany amin'ny dikan-tsarimihetsika Sahy maka risika.
Ao amin'ny anjara asany amin'ny maha-fitaovana tranainy azy, i Kevin dia "telefonina ho an'ny olombelona" hamela ny fanahy hiteny amin'ny alalany. Kevin dia nisaintsaina nandritra ny dingana ary tsy nahatsiaro ny zavatra mitranga mandritra ny fivoriana. Rehefa miteny amin'ny alalan'i Kevin ny fanahy iray, ny feony, ny endriny ary ny fomba fitenenany dia manova ny toetran'ny toetry ny fanahy na dia izy aza.
Kevin dia manasa fanahy iray izay mampiasa ny anarana hoe Ahtun Re, izay miteny amin'ny ezaky ny Ejipsiana, raha milaza izy fa ny fahazoana ny fahazoana ny fahamasinana dia tany Ejipta tamin'ny 3500 taona lasa izay. Na dia tsy nino aza aho tamin'ny voalohany, rehefa niara-niasa tamin'i Kevin nandritra ny taona maro, dia tonga teo amin'ny fehin-keviny fa i Ahtun Re dia afaka mametraka ny lalao miaina amin'ny diany lava amin'ny ambaratonga ambony. Tonga tamin'ny fanombanana ihany koa aho fa i Ahtun Re dia tena fanahy tokoa izay maha-samy hafa an'i Kevin. Miorina amin'ny fehin-kevitry ny fahalalaham-pitenenan'i Ahtun Re aho, izay mihoatra noho ny ahy, i Kevin na ireo olon-kafa izay nifaneraserako. Raha te hahafantatra misimisy kokoa momba ny asa nataon'i Kevin, Ahtun Re sy ny momba ny raharaha momba ny fanambadiana virijiny, dia mandehana: Raharaha Reincarnation an'ny olo-malaza Ryerson-Semkiw
Rehefa tonga teo amin'ny famaranana aho fa niaina tany amin'ny tontolon'ny fanahy i Ahtun Re, dia nanapa-kevitra ny hangataka fanontaniana lehibe momba ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny vatana hafa aho. Ny resadresaka nifanaovako tamin'i Ahtun Re momba ireo olana ireo, miaraka amin'ny fampahafantarana fanampiny avy amin'ny mpiara-miasa izay manana fanomezam-pahasoavana dia nitarika tamin'ny famoahana ny bokiko:
Ireo tsy fifankahazoana amin'ny fitaovana nolalovana momba ny fanambadiana indray ny vatana ary ny ara-panahy
Misy boky hafa koa izay miezaka manazava ny fiverenan'ny vatana vaovao sy ny tontolon'ny fanahy. Rehefa nianatra ireo asa ireo aho, dia tsapako fa nisy ny tsy fitovizan'ny zava-nitranga. Naveriko tany Ahtun Re ireo disadisa ireo nandritra ny fivoriana niaraka tamin'i Kevin Ryerson, mba hahazoana ny fampidirana an'i Ahtun Re momba ity vaovao mifanohitra ity.
Zava-dehibe ny hahatakaran'ireo mpamaky fa ny resaka ataoko amin'ny Ahtun Re dia tena lalao roa ary mety ho tena henjana izy ireo. Mifanohitra amin'izany kosa, amin'ny loharanom-baovao hafa, matetika ny fampahalalana dia mandeha amin'ny fomba iray, avy amin'ny fanahy, amin'ny alàlan'ny fantsona ary amin'ny fanontana. Nianatra ny lalan-kaleha aho mba tsy hatoky ny loharanom-baovao na ny fitsaboana rehetra. Amin'ny farany, namaly ny valin'ny fanontaniako i Ahtun Re tamiko. Nanjary natoky azy sy ny valiny aho tamin'ny fanontaniako.
Fanapariahana tsy fifandanjana amin'ny fampahalalam-baovao
Ao amin'ny tranonkalan'ny tranonkala ReincarnationResearch.com izay omena etsy ambany dia aleoko ny disadisa izay hitako tao anaty boky roa momba ny vatana vaovao indray ary ny tontolo ara-panahy. Manolotra ny fanadihadian'i Ahtun Re momba ireo olana ireo aho. Izaho no voalohany nanaiky fa tsy manana fomba hanaporofoana fa marina ny valintenin'i Ahtun Re. Izaho dia mizara fotsiny ny fampahalalana azoko tamin'ny alalan'ny tolona nataoko mba hahatakarana ny dingan'ny fiverenan'ny vatana vaovao.
Amin'ny fanolorana ireo fanakianana ireo, tsy maniry ny hanambaniana ny lanjan'ireo boky ireo aho. Mankalaza ny mpanoratra aho noho ny ezak'izy ireo sy ny antsony mba hanompo amin'ny famoronana ireny lohateny ireny. Isika rehetra dia mitovy ny faniriana hanampy ny olombelona hahatakatra tsara kokoa ny toetrany ara-panahy.
Ny drafitry ny fanahinao: mahita ny tena dikan'ny fiainana kasainao talohan'ny nahaterahanao, nataon'i Robert Schwartz
Ny lohahevitra lehibe ao amin'ny bokin'i Mr. Schwartz dia ny hoe mieritreritra ny fiainana an-davan'andro amin'ny olona izay fantatsika tamin'ny fampodiana talohan'izay, noho ny fihetsiky ny fo sy noho ny karma izay tsy maintsy ataontsika miaraka amin'ireo fanahy ireo.
In Ny drafitry ny fanahinao, dia voalaza fa raha misy fanahy manimba ny hafa tamin'ny lasa teo aloha, dia tsy maintsy niaina izany fihoara-tena izany ihany koa ny fanahy amin'ny fiainana ho avy. Ny lohahevitra momba ny karma dia sarotra ary voaverina amin'ny antsipiriany ao Fiandohan'ny fanahy, fa ity fototra fototra momba ny karma miteraka "izay manodidina azy" dia marina.
Toe-pifanakalozan-ny ratsy dia tsy fanomezana
Ny drafitry ny fanahinao Amin'ny ankapobeny dia boky tsara izany, fa ny toerana dia alefa izay tena mahaliana ahy. Ao anatin'izany dia voalaza fa raha misy olona voan'ny herisetra amin'ny fiainana amin'ny ho avy noho ny karma, ny mpikambana iray ao amin'ny tarika an-tariby dia afaka manolo-tena ho mpamono olona hanampy amin'ny famolavolana lesona, tsy misy karma noforonin'ny fanahy faharoa manaiky ny ho ilay mpangalatra. Araka ny voalazan'i Ahtun Re, diso izany.
Ny fanahy matotra dia tsy hanisy ratsy na oviana na oviana amin'ny hafa, satria izany dia manohitra ny toetry ny fanahy matotra sy ny fanararaotana dia mety hamorona karma ratsy. Fa kosa, ny fanahy tsy mety maty, izay angamba namono olona na hetsika mahery setra hafa, dia hahita fanahy tsy mety indray amin'ny fiainana ho avy, izay mianatra ihany koa ny lesona sarotra. Io fanahy tsy mety maty io dia hamoaka "izay mandehandeha, mandroso".
Hevitra: Hitler, ny tsy fahampian-tsakafo holocausta sy ny vanim-potoana vaovao
Ny fiheverana fa ny fanahy iray dia manolo-tena hanao fanevatevana tsy misy ny karma malemy ratsy dia tena mampidi-doza, satria manizingizina fa tsy misy tompon'andraikitra amin'ny tompon'andraikitra ary ny moka iharan'ny herisetra dia mendrika izany. Azon'izy ireo atao ny mametraka ity lojika ity amin'ny filazàna fa ny Hitler dia nahatonga ny Jiosy ho niharan'ny fankasitrahana tamin'ny Holocaust tamin'ny fanampiana azy ireo hianatra lesona tsy maintsy nianarany. Tena naheno "mpampianatra" ara-panahy vaovao iray aho, izay miantso ny tenany ho "tompony" ho tonga nofo, manao ity fanambarana adaladala momba an'i Hitler sy ny Holocaust.
Amin'ny lafiny iray, ny olona miresaka momba izay nanao ity fanambaràna ity dia tsy hoe Robert Schwartz. Ny fahatsapako an'i Mr. Schwartz dia hoe izy dia olona tsara fanahy, tia rariny ary manana heviny tsara. Nangataka azy aho handinika ny fanesorana ny lohahevitra voalaza etsy ambony ao amin'ny bokiny amin'ny fanontana amin'ny ho avy.
Amin'ny ankapobeny, ny herisetra sy ny fanararaotana dia noho ny tsy fahampian-tsakafo sy ny ratran'ny fanahy iray. Araka ny nolazain'i Ahtun Re:
"Ny ratsy dia tsy fanomezana na ampahany amin'ny planin'Andriamanitra."
Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, avy amin'i Khorshed Bhavnagari
Taomin'ny Fanahy Rehetra
Voalaza fa misy ny sehatry ny tontolo fanahy ary ny fanahin'izao tontolo izao dia mitombo hatrany amin'ny tontolon'ny tontolo fanahy. Amin'ny faritra ara-panahy, dia miara-miasa amin'ny fanahy mitovy amin'ny fahatsiarovan-tena isika.
Mifanaraka amin'io fanombanana io izahay. In Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, mpiangaly mozika Echo Bodine sy Judy Goodman, izay nitantara fa niaina tamin'ny tontolon'ny fanahy izy ireo, dia nanome lanja ny fitsangatsanganana ho any an-danitra sy ny haavony. In Fiandohan'ny fanahy, Ahtun Re dia manome tsipiriany momba ny haavon'ny tontolo ara-panahy.
Ny Fanahy dia novolavola tamim-pahefana: Mpirahalahiana fanahy na Dipole
Ny fanahy dia noforonina tsikelikely mba hifameno sy hifandanjana. Ireo fanahy ireo no fototry ny hevitra malaza momba ny fanahy. In Fiandohan'ny fanahy, Aleoko ny dipole amin'ny teny hilazàna ireo fanahy ireo, satria izy ireo dia manana toetra mifanohitra amin'izany.
Laurel & Hardy ohatry ny fanahy
Ohatra, mpivady dipole eo amin'ny sehatry ny fialamboly, nohamafisin'i Ahtun Re, dia ny ekipan'ny hatsikana an'i Laurel & Hardy. Stan Laurel dia mahia ary nandray ny andraikitry ny dimwit tsy afa-manoatra, raha i Oliver Hardy dia matavy loatra ary nilalao ny anjaran'ity farany ity. Ny toetran'izy ireo mifanohitra dia nahatonga ny fahaizan'ny hatsikana. Raha hiverimberina dia i Laurel sy Hardy dia vady fanahy na, hampiasa ny terminoloziko, dipoles. Mariho fa tsy ny olon-droa ihany no samy manana ny toetrany, fa samy hafa karazana ny vatana. Ny mahaliana, ny reincarnations an'i Laurel & Hardy dia fantatra. Raha te hahalala bebe kokoa dia mandehana any: Trangam-panjakan'ny vatana vaovao any Laurel sy Hardy | Josh & Danny Bacher
Romantic Soul Soul
Ny ankabeazan'ny mpiraki-trana dia tsy lasa mpifankatia. Ny foto-kevitra malaza momba ireo mpifankatia romantika dia manondro ireo olona izay manana firaisana maro ary niara-nahita fa mifanentana izy ireo. Io fiaraha-miasa io dia mitarika ireo fanahy ireo hifidy ny hanohy ny fanambadiana indray. Ny fanahy izay tsy mifanaraka dia miady amin'ny fifindrana amin'ny ho avy, raha tsy misy ny karma tsy manimba izay mitaky azy ireo hivoatra indray.
Tsy miorina amin'ny biby ny olona
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, voalaza fa ny olombelona dia afaka teraka ho biby. Ahtun Re dia nanambara fa tsy marina izany. Ireo fanahy tafiditra ao amin'ny fianarana sy ny fitomboany ary ny fanahin'ny olona dia tsy hianatra zavatra betsaka amin'ny fampidirana ao amin'ny fanjakan'ny biby, izay tarihin'ny fitondran-tena tsy mendrika.
Marina izany, araka ny voalazan'i Ahtun Re, fa rehefa nanomboka ny dingan'ny fanarenana ao amin'ny tontolon'ny zavaboary eto an-tany ny fanahin'ny olombelona, ​​dia nanolo-tena izy ireo tamin'ny voalohany, na hiantehitra amin'ny biby, mba ho zatra amin'ny fiaramanidina. Ity dia dingana iray voalohany, ny dingan-doha, izay tsy nisy tamin'ny taonarivo. Ahtun Re dia nanamarika io hevitra io izay mety niditra tao Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy tahaka ny mpanoratra, Khorshed Bhavnagari, dia nobeazina tao amin'ny kolontsaina Hindu, izay ahitana ny finoana fa ny olombelona dia afaka miverina indray amin'ny maha-biby dia mihamitombo. Raha ny salamo, ny fanahin'olombelona dia miorina indray amin'ny maha-olombelona, ​​fa tsy toy ny biby.
Ny lanjan'ny mahazatra momba ny natsangan'ny biby dia mifandraika amin'ny traikefa momba ny telepatieko izay niainako niaraka tamin'ny hoditra iray, izay inoako fa misy ny olona sy ny finoany, toy ny Hindu religion, mino fa ny olombelona dia afaka hiverina indray amin'ny maha-biby. Ity zavatra niainana ity dia naseho teo am-pelatanan'ny tranga iray momba ny vatana vaovao momba ny vatana, izay hita ao amin'ny bokin'ny mpitsabo an'i University of Virginia Jim Tucker, Miverena any amin'ny fiainana. Raha te hianatra bebe kokoa, mandehana any:
Miaina vatana vaovao indray ve isika ?: Fahatsiarovana ny fiainan'ny zazalahy Thai taloha toy ny bibilava tao amin'ny fiverenan'i Jim B. Tucker ho amin'ny fiainana, sy ny fifandraisan'ny biby sy ny biby.
Ny datin'ny fahafatesana dia tsy voalahatra
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, voalaza fa misy daty voafaritra sy voafaritra mialoha amin'ny fahafatesan'ny olona iray. Ahtun Re dia nanondro fa tsy marina izany. Na dia mety hisy aza ny fitomboan'ny mety ho androm-piainana iray noho ny karma, amin'ny ankapobeny, ny daty hahafatesana dia tsy raikitra.
Ny natioran'ny fanjakana ambany kokoa
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, ny haavon'ny tontolon'ny tontolon'ny fanahy dia faritana ho mainty maina miaraka amin'ny vatolampy sarotra. Ahtun Re dia nanambara fa ity famaritana ity dia fanitarana. Raha ny marina, ny toerana ambony kokoa dia toerana mahafinaritra kokoa.
Ny fomba tsara hahatakarana io olana io dia ny fiheverana fa misy fanahy iray mitatatata amin'ny fiaramanidina izay maneho ny fivoarany. Ny famonoan'olona sy ny mpanao heloka bevava dia handeha amin'ny toerana na toeram-ponenana misy mpamono hafa sy mpanao heloka bevava, izay azontsika eritreretina fa misy fifanoherana sy fankahalana.
Ny Top tsara fanahy dia tsy manome fahazoan-dàlana ho amin'ny Fahatongavana ho nofo
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, dia voalaza fa ny fanavaozana indray, ny fanahy dia mahazo mahazo alalana avy amin'ny "fanahy tsara tsara indrindra" amin'ny haavon'ny tontolon'ny fanahy izay misy azy. Ahtun Re dia milaza fa tsy marina izany. Fa kosa isika dia mahazo tari-dalana avy amin'ny fanahy misandratra ary misy olona iray manao drafitra ho amin'ny fampodiana antoandro mifototra amin'ity fitarihana ity, ary koa amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpikambana ao amin'ny tarika misy antsika.
Ankoatra izany, dia mety hitranga haingana ny firaisana amin'ny vatana vaovao. Ian Stevenson tena mahaliana iray dia ny fianarana ny raharaha momba ny fiainana: Ny Monkista Bodista izay niaina tamin'ny fomba miafina ny fahafatesany sy ny fandevenana azy
Ny sarin'ilay sarimihetsika dia sarotra kokoa noho ny tranga indray vao teraka, anisan'izany ireo izay notadiavin'i Ian Stevenson, MD, izay mampiseho fa ny fanahy dia afaka mitoetra mihoatra ny vatana ara-nofo iray isaky ny mandeha. Raha te hianatra bebe kokoa momba ity tranga ity ianao dia mandehana any: Ny fihenam-bidy
Ny fivoaran'ny paosy dipole na ny fanahy fanahy
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, dia voalaza fa ny dipole, izay heverina ho voafaritra etoana etsy ambony, dia tsy afaka mivoatra miavaka, fa tsy maintsy miara-miditra amin'ny fiaramanidina ara-panahy ambony kokoa izy ireo. Ahtun Re dia nilaza fa tsy marina izany. Ny dipole dia afaka mivoatra na mivelatra tsindraindray, na dia ny dipole ara-panahy lavitra kokoa aza dia miezaka manampy ny dipole, na ny fanahy vady, noho ny fiaraha-miory.
Ny mpianatra na ny fanahy fanahy dia tsy mifandray amin'ny fanahy iray
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, voalaza fa ao amin'ny planina avo indrindra amin'ny tontolon'ny fanahy, izay faritana ho Level VII na 7, ny dipoles (toa an'i Laurel & Hardy) dia tsy maintsy mitambatra ary tonga fanahy iray. Ahtun Re dia nanondro fa tsy marina izany. Dipoles dia mitazona ny maha-izy azy manokana mandritra ny fisiana sy amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny tontolon'ny fanahy.
Etsy an-danin'izany, amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fandrosoana ara-panahy, ny fanahy iray dia tonga amin'ny fahafahana mampifandray ny fahatsiarovany amin'Andriamanitra. Manazava i Ahtun Re fa afaka manao izany izy ary rehefa miara-mandeha amin'Andriamanitra izy dia very ny fahatsapany ny maha-izy azy manokana. Ahtun Re dia afaka mandingana ny haavon'ny fahatsiarovan-tenany ary miditra indray ny fahatsapany ny maha-izy azy. Miara-miasa izy.
Ahtun Re dia milaza fa ao anatin'ny fahatsapany mahazatra ao amin'ny fiaramanidina avo indrindra izy dia ao anatin'ny toe-piainana "ekskifizam-pahalemana". Izany no manazava ny antony isakarako an'i Kevin Ryerson isaky ny miresaka amin'i Ahtun foana aho.
Ny natioran'ny Ghosts
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, voalaza fa ny matoatoa dia fanahy tsy dia mandroso lalandava ary tsy te hiverina any amin'ny tontolon'ny fanahy, satria tsy te-hiverina any amin'ny tontolon'ny fanahy. Ahtun dia nanondro fa tsy marina izany. Izay hitantsika ho matoatoa na fisehoana dia azo alaina avy amin'ny ambaratonga maro samihafa amin'ny tontolon'ny fanahy. Ny toetoetran'ny matoatoa no resahina ao Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana.
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao, Karma ary Bodhisattvas
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, dia voalaza fa ny olon-drehetra izay tonga eto an-tany dia manao izany noho ny karma tsy voavaha. Tsy marina izany, araka ny filazan'i Ahtun Re, ary araka ny hazavaina Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, hatramin'ny 20% ny fanahy eto an-tany dia eto an-tsitrapo hanampiana ny olombelona hivoatra. Ny Buddhists dia miantso ny fanahy tsy misy karma izay tonga nofo noho ny faniriana hanampy ny zanak'olombelona mivoatra "bodhisattvas."
Fanahy Robes sy Auras
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, dia voalaza fa any amin'ny faritra ara-panahy, ny fanahy dia omena fanafody fitafy ho an'ny tanjona samihafa, satria manome fahaiza-manao manokana izy ireo. Manambara i Ahtun Re fa tsy marina izany, na dia toy ny akanjo aza ny auras misy fanahy sasany.
Ny Tany Tsy Manana Vovoka Ratsy: Ny Fiainana dia Sehatry ny Fitomboana
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, dia voalaza fa ratsy ny fihovitry ny tany ary tokony hialana amin'izany. Ahtun Re dia nanambara fa tsy marina izany. Ny fiainana eto an-tany dia ny fomba anaovanao izany ary ny fanomezam-pahasoavana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, izay mamela antsika hitombo sy handroso toy ny fanahy.
Fiovana eto an-tany, ny fiafaran'izao tontolo izao sy ny bokin'ny Apokalypsy
In Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy, dia voalaza fa hisy horohoron-tany goavana manerana izao tontolo izao izay hitranga ao anatin'ny ora vitsivitsy, izay hamafa ny 75% an'ny mponina manerantany. Ho an'izany, ny 25% amin'ny olombelona ihany no ho velona.
Ny boky New Age hafa dia mamaritra toe-javatra toy izany amin'ny andron'ny arivotaona izay tsy misy afa-tsy ny haingon-tsoavaly no ho tafavoaka velona amin'ny Apocalypse. Ny fiafaran'ilay horohorontany manerantany dia nahatratra ny crescendo tao amin'ny 2012 noho ny fiafaràn'ny kalandrie Maya. Ny bokin'ny Evanjely Kristiana dia mamarana ny lohahevitra maneran-tany, izay resahina ao Teraka indray: International Edition (2011).
Hatramin'ny nisian'ny horonan-tsarimihitry ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana tao amin'ny faribolan'i New Age, dia nanontany an'ity raharaha ity imbetsaka aho nanomboka tamin'ny niarahako niasa tamin'i Kevin Ryerson sy Ahtun Re tao 2001.
Ahtun Re dia nanambara hatrany fa tsy hitranga ny fiovan'ny toetr'andro. Hisy hetsika mahazatra toy ny horohoron-tany sy tsunamis, toy ny efa an'arivony taona izao, eto an-tany, saingy ity tranga mahatsiravina ity izay maminavina fa ny 75% ny mponina dia hofoanana dia tsy voafaritra.
Etsy andaniny, ny fiakaran'ny mari-pahaizan'izao tontolo izao dia tena zava-misy. Ny fiovàna, toy ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina, dia hitranga, saingy amin'ny dingana tsikelikely.
Amin'ny ankapobeny, mieritreritra aho Ny lalan'ny tontolon'ny fanahy dia boky tsara, saingy mahatsapa aho fa mila miresaka amin'ny trano aho fa izaho, sy Ahtun Re, ny mpitsara dia diso ary mety hitondra tahotra tsy ilaina.